China CSK Head Open Rivet Nut စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Yuke
လူမီနီယံတံဆိပ်ခတ်အဆုံး Blind Rivet
Flat Head အပြည့်အဝဆFull္ဌဂံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သံလွင်သီး Rutt မိတ်ဆက်ခြင်း
Rivet Nut Countersunk Open End ဖော်ပြချက်ကို Knurled
ပွင့်လင်း End Flat ပြားခေါင်းညှပ်ခန္ဓာကိုယ်ကန်းသော Rivet Nut
နှစ်ချက် Core ဆွဲထုတ် Riveter နိဒါန်း
လူပျိုလက် Riveter သေနတ်နိဒါန်း
မည်သည့်လျှောက်လွှာမဆို၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျိတ်အခွံမာသီးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်း R&D အင်ဂျင်နီယာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာရောင်းအားသည်သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။
CSK head open open rivet ခွံမာသီးမာကျောသောbearingရိယာသည် torque ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်သောကြောင့်ပိုမိုခက်ခဲသောပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ တူးထားသောသို့မဟုတ်တွင်းပေါက်များတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
အချင်း: M3, M4, M5, M6, M8, M10
ဦး ခေါင်း CSK ဌာနမှူး
ကိုယ်ခန္ဓာမျက်နှာပြင်: PLAIN SHANK
စံ: Din / ANSI / JIS / GB
လျှောက်လွှာ ချည်နှင့်အတူ Tubular rivet ။ပလတ်စတစ်၊ သံမဏိသတ္တုများအဖြစ်သုံးသောပစ္စည်းအမျိုးအစားများတွင်အသုံးပြုသည်။
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း 200 တန် / လ
မူလ: WUXI တရုတ်
QC (နေရာတိုင်းစစ်ဆေးခြင်း) ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့် Self- စစ်ဆေးပါ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ပင်လယ်အားဖြင့်၎င်း၊
အထုပ် - ၁။ အထုပ်အပိုး - တစ်ဘူးလျှင် ၂၀-၂၅ ကီလိုဂရမ်)
၂။ အရောင်လေးထောင့်ကွက် - အရောင်သေတ္တာ၊ ၀ င်းဒိုးသေတ္တာ၊ နှစ်လွှာ shell ကိုထုပ်ပိုးသို့မဟုတ် clients'requirement အဖြစ်။
polybag သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်သေတ္တာထဲမှာ 3. ဌန်။
၁။ ထုတ်လုပ်သူ - ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ Rivet Nut, Nut Insert, Blind Threaded Insert အတွက်သိုလှောင်ရုံကြီးရှိသည်။
2. အမြန်ပေးပို့: စတော့ရှယ်ယာပစ္စည်းများ 3-7 ရက်, စတော့ရှယ်ယာမဟုတ်သောပစ္စည်းများ 10-15 ရက်။
၃။ အခမဲ့နမူနာ - နမူနာအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စရိတ်ဖြင့်စာပို့ခြင်းဖြင့်ပေးပို့လိမ့်မည်။
၄။ အခမဲ့ Courier Cost - DHL၊ FedEx, UPS သို့မဟုတ် TNT ။
ရှေ့သို့ ပွင့်လင်း End Flat ပြားခေါင်းညှပ်ခန္ဓာကိုယ်ကန်းသော Rivet Nut
နောက်တစ်ခု: Rivet Nut Countersunk Open End ဖော်ပြချက်ကို Knurled
Csk ဌာနမှူး Open End Rivet Nut
Flat Head ဖွင့်ထားသည့် Blind Rivet Nut
ပွင့်လင်း End Flat ပြားခေါင်းညှပ်ခန္ဓာကိုယ်ကန်းသောချည်နှောင် Rivet Nut
Dome Head Blind Rivet သံမဏိပြားများ
သံမဏိအပြည့်အဝ CSK Head Blind Rivet
အပြည့်အဝလူမီနီယမ်အမိုးခုံး Head Blind Rivet
အပြည့်အဝသံမဏိအမိုးခုံး Head Blind Rivet
Countersunk Open End မျက်မမြင် POP Rivets
Wuxi Yuke ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်။